Malware Attack. Ahoana ny fomba hamahana ny laharana - Semalt Tips
Nilaza i Nik Chaykovskiy, talen'ny Success Manager ao amin'ny Semalt fa viriosy sy malware dia fandaharam-pampianarana be pitsiny, mitaky fotoana sy hery be hanesorana azy ireo. Indraindray isika dia tsy afaka miala amin'ireo zavatra ireo, ary manohy miparitaka amin'ny tahiry iray mankany amin'ny hafa.
Tsy mety ny miteny fa ny fitaovana sy ny rindrambaiko Antivirus dia tsy ara-drariny sy azo itokisana. Araka ny tatitra nataon'ny Comparatives, fikambanana iray izay mandinika sy mandinika ny fitaovan'ny fiarovana, ny anton-draharaha tsara indrindra momba ny Antivirus dia nahatratra 98% ny malware sy ny viriosy. An-jatony ireo virosy an'arivony sy ny vovony no mavitrika amin'ny aterineto, noho izany dia tena sarotra ny mahafantatra sy miala amin'ny rehetra. Ny ankamaroan'ny tombantombana dia manambara fa ny anton'ny rindrambaiko antonony dia tsy misy dikany.
Ny habetsaky ny fahavoazana
Raha vao voavaha ny rafitrao dia lasa sarotra aminao ny mahafantatra ny habetsaky ny fahavoazana atao amin'ny rafitra miasa. Na ny manam-pahaizana amin'ny solosaina aza dia tsy afaka manome anao ny antonta sy ny vaovao marina. Amin'ny toe-javatra toy izany, dia tsy ho vitantsika ny hahalala ny fomba hamahana sy hamerenana ireo rakitra voaongana. Ny sasany amin'ireo viriosy dia miditra amin'ny rafitry ny ordinateranao ary mamorona olana maro, anisan'izany ny rootkits. Raha tsara vintana ianao satria ny viriosy sy ny malware dia tsy maintsy araraotinao araka izay azo atao.
Fomba hisorohana ny viriosy sy ny aretina hafa
Zava-dehibe ny mahafantatra ny zava-drehetra momba ny malware sy ny viriosy alohan'ny hanaovantsika zavatraazy ireo. Ny malware dia fohy ampiasaina amin'ny programa sy fitaovana tsy misy fiantraikany. Tokony ho renao momba rootkits, spyware,viriosy, ary tranaona. Izy ireo dia endrika isan-karazany malware ary heverina ho manimba ny rafitry ny ordinateranao. Voaforona ny malwaresamy avy amin'ny teny fiderana sy mpianatra mpianatra. Na ny manam-pahaizana amin'ny ordinatera dia mamorona azy ireo amin'ny fanampiana ireo programa samihafa. Misy vondrona solosaina voalaminateknika sy manam-pahaizana izay mikendry ny hametraka fitaovana elektronika maro ary hangataka ny vidim-panavotana. Mitady hatrany ny isam-piahiana ara-tsosialy izy ireo,bola antsipiriany momba ny karatra, ary ny angona hafa. Tokony hisoroka ny fampiasana sary vetaveta sy filokana. Zava-dehibe ihany koa ny tsy hisafidiananaoHafatra tsy fantatra tsy fantatra, misoroka fitaovana fizarana fitaovana, rindrambaiko tsy ara-dalàna, tranonkala sy mozika. Ny sasany malaza ohatra dia BitTorrent, Frostwire,ary Limewire. Aza manokatra mailaka avy amin'ny ID tsy fantatra. Tokony hisoroka ny fidirana amin'ny rohy ihany koa ianao raha tsy matoky anao fa izy ireosoa aman-tsara. Tsy tokony haka horonantsary avy amin'ny loharanom-baovao tsy fantatra ianao. CNET, Tucows, SourceForge, ary FileHippo dia tranokala azo antoka ary azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra. ianaoTsy tokony hokarohina amin'ny dokambarotra an-tserasera izy ireo satria mety misy viriosy sy malware.
Zava-dehibe ny mampiasa programa anton-dresaka azo antoka sy ara-drariny. Mifameno ny programa samihafa ary manofa scanner maro amin'ny rafitry ny solosainao. Avast dia ohatra tonga lafatra amin'izany; Ampiasain'ny olona maro eran-tany izany. Raha mampiasa ny profil media sosialy toy ny Facebook ianao, dia tsy tokony hanaiky fangatahana namana avy amin'ny olona tsy fantatra. Apetraho ireo fanavaozam-baovao Windows mba hametrahana sy hizarana dikan-teny farany amin'ny dingana tsy tapaka. Maro amin'ireo dikan-teny ireo no tonga amin'ny fiarovana matihanina mba hahafahanao matoky ireo loharano ireo. Ny MySpace sy Twitter dia mety misy rafitra code tsy azo antoka, noho izany dia tokony hitandrina ianao raha mampiasa ireo tranonkala tambajotra sosialy Source .